Bisha September 10keeda oo la qabanaayo Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya – idalenews.com
Guddiga doorashada ee shaley barlamaanka iska soo dhex doortey ka dibna ansixiyey baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya la qaban doono 10-ka bisha September 2012, Guddigan oo maanta kulan isugu yimid ayaa gabagabadii kulankaa isku raacay in la qabto doorashada tobanka bisha September isla markaana ay soo gudibiyaan codsiyada musharixiinta ka qeybgalaysa doorashada inta u dhexeysa 3da illaa 6da September.
Musharixiin badan ayaa u taagan inay ka qebgalaan doorashada madaxweynaha iyadoo ay tahay doorashadan tii ugu horeysey oomuddo afartan sano ah ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya.
Illaa iyo hadda guddiga doorashada ayaan shaacin shuruudaha laga doonayo qofka musharaxa ah ee isu soo taagayo in uu qabto jagada ugu sareysa ee dalka.
Waxaa magaalada Muqdisho hadda ka wada olole ballaaran musharixiinta doorashada iyadoo hadda ay kala cadaatay beelaha isugu soo haray in ay qabtaan jagada Madaxweynaha maadaama beesha Digil iyo Mirifle ay ku fariisteen kursiga guddoomiyaha Baarlamaanka.
In kabadan labaatan musharax ayaa la aaminsan yahay inay haatan doonayan inay isu soo taagaan tartanka madaxweynaha Soomaaliya inkastoo musharixiin badan ay ku midoobeen hal urur kuwaas oo laga yaabo inay soo doortaan hal musharax oo u tartama xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Guddiga doorashada ayaa la filayaa in berito ay ku bandhigaan nidaanka doorashada iyo shuruudaha laga doonayo musharax madaxweynaha iyadoo dadka u falanqeeya arrimahaan ay sheegayaan in ay dhici karto in lacag badan lagu xiro isa soo sharixida xilka Madaxweynaha si loo yareeyo tirada musharaxiinta u taagan xilkaas.